Iwo makumi maviri nemaviri mabhizinesi eAfrica anofambisa nyika - AFRIKHEPRI
Liye vadiki vemabhizinesi vari kuchinja kumeso kwe Africa. Ndafunga kuburitsa rondedzero yeavo makumi maviri nevaviri vari pasi pemakore makumi matatu vane zvinonakidza kuitika mukondinendi. Kuti ndiite izvi, ndakashanda kunze kwevatongi gumi nevaviri kubva kumativi ese eAfrica munaNovember apfuura kuti ndibatsire kuona boka iri revashambadziri vakasarudzika uye vane hunyanzvi pasi pemakore makumi matatu.
Kubva Real Estate kuburikidza mukugadzira, nhau, unyanzvi hwokugadzira zvinhu, mutema ano, utano, kurima uye mufashoni, 30 muduku Entrepreneurs African, anonetsa uye nzira itsva pazvinhu izvi kuti mabasa nemari vanoda chaizvo kuchinja Africa. Pamwe chete, inomiririra yakanakisisa yemweya wekutengeserana, inyanzvi uye hukuru hwepfungwa dzezera ravo.
Vanogadzirisa zvinetso zvakadai sokushayikwa kwehutano hwehutano uye magetsi, kupa hutsva hugadzirisheni hwekutapudza zvidhaka, kuvaka mamiriro ehutano uye emagariro uye nekuumba mabasa akawanda. Vamwe vavo vanoita zvokudya zvatinoda, kugadzira zvipfeko zvakanakisisa zvevakadzi vedu uye vamwe vanovandudza mapurogiramu emafoni eAfrica yose.
Zvechokwadi, urongwa uhwu hahuna hurumende kana huzere, asi ihwo hwepedyo kune zvauchawana kubva pakutsanangurudza.
Kuwedzera kwemajaya kwe30 pasi pemakore 30 eAfrica: vanyori vechidiki vevekondinendi, kuvhiringidza kwemazuva ano uye nyeredzi dzinopenya dzezuva ramangwana:
Jonathan LIEBMANN (South Africa), Real Estate Developer uye CEO weZvirokwazvo
LIEBMANN, makore gumi nemana 28, ndiye mutungamiri mukuru we Propertuity, sangano rekuSouth Africa rakasimudzirwa. Iye ndiye anosimudzira shure kwekuvakwa kweMaboneng City, inharaunda yemagariro emunharaunda kumabvazuva kweCiddle of Johannesburg. Kare hanya uye dzakaderera munzvimbo izere vakasiya maindasitiri zvivako, Maboneng akanga Shandurwai Liebmann nenzira mumaguta guta guru vakavhengana Kushandiswa unyanzvi maberere, vemifananidzo 'Studios, yezvokutengeserana dzezvimwe uye mahofisi.
Patrick NGOWI (Tanzania), CEO weHelvetic Solar Contractors
Makore mapfumbamwe akapfuura, Patrick NGOWI, ane makore anopfuura 28, akagamuchira chikwereti chiduku kubva kuna amai vake kutanga bhizinesi. Akatanga kutengesa Chinese mobile phones, asi kana akaona dukuduku chikamu Tanzanians akanakidzwa kuwana yakatsiga uye yakavimbika magetsi, aiziva aifanira kugadzirisa dambudziko iri. Ngowi chinozoiswa Helvetic Solar Contractors Limited, mumwe piyona romugove, kugadzwa uye dzigadziridzwe rezuva enyika yose kutenderera Northern Tanzania. Helvetic Solar Contractors ndiyo kambani yekutanga muNorth circuit yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvezuva. Iko kambani yakagadzirwa ne $ 3 Mamiriyoni mumutengo gore rapera.
Lorna RUTTO (Kenya), Green Tech Entrepreneur uye Nheyo yeEcoPost
Lorna Rutto, ndiye muvambi wesangano 28 makore EcoPost, kunobatsira evanhu zvebhizimisi kuti manufactures aesthetic noruzhowa mbiru, kutsigira uye zvakatipoteredza noushamwari kushandisa mapurasitiki tsvina, zvakawanda zvakatipoteredza nzira noushamwari huni. (...) Rutto awana yemarudzi mukurumbira wayo kuita nokuvapa imwe nzira yokugadzirisa kutambisa utariri kuKenya pangozi epurasitiki.
Justin STANFORD (South Africa), Muvambi uye CEO we4Di Group
STANFORD, ane makore 28, ndiye software entrepreneur uye mutungamiri wemari. Makore manomwe akapfuura, akatora kodzero dzekugovera dzeEETET, anti-virusi software kubva kuSlovakia. Nhasi, Stanford ESET Southern Africa inoshandisa chechi yeEET munharaunda ichi uye inotengesa urongwa hweEET hwekuchengetedzwa kweIndaneti mune dzimwe nyika dze20 muSouth Africa. Ikambani inodarika zvinodarika 10 mamiriyoni ezvitengesi zvekutengesa nekugadzirisa nezve 5% yemakirasi emishonga antivirus muSouth Africa. Stanford ndiyewo muvambi weChristian 4Di, mari yekutengesa mari inowanikwa muKapa.
Rapelang RABANA (South Africa), Musiki we Yeigo Communication
Rapelang Rabana, 28 makore, ndiye CEO uye akatanga Yeigo Communications, imwe kambani itsva inobva kuCape Town, iyo anova foni software, kusanganisira mabasa chokuita inzwi pamusoro IP, pakarepo mameseji, kutumirana mameseji uye rubatsiro rwekutumirwa kwevashandi. In 2008, Telfree, wakasimba Swiss pamusoro Mobile foni awana rimwe 51% muna Yeigo.
Kimiti WANJARIA & Ian KAHARA (Kenya), Vatangi ve Serene Valley Properties
Vose pakupera maviri dzavo, Kimiti Wanjaria Kahara uye Ian tiri chikamu boka mana co-havaoni kuti Serene Valley Properties (SVP), chaiyo chivako kukura kambani kuNairobi kuti anovaka otengesa dzinogarwa zvivako muKenya boka rinokura riri pakati. SVP riri shure basa kukura Sigona Valley, munhu namahwindo chivako kunze Nairobi munokosha $ mamiriyoni 4,2.
Kuverenga zvakare: IYF 2015 World Camp: 2007 Vechidiki varipo
Evans WADONGO (Kenya), Mutungamiri weSADFA Kenya
WADONGO, ndiye muongorori weKenya 26 uyo akasika girazi rezuva rezuva rainzi Mwanga Bora (muchiSwahili "Good Light"), chiziviso chakagadzirirwa kutsvaira tsvina yefososheni nematombo emiti muKenya. okumaruwa. WADONGO akagovera zviuru zvezviedza izvi kumaruwa eKenya, uko kune magetsi maduku kana kusina magetsi. Sangano rayo, Sustainable Development for All (SDFA), rinotsigira simba rekugonesa rinodzidzisa varombo veKenya kuti vadzokere magetsi aya ezuva nekuvatengesa kuti vawane purofiti.
Ludwick Phofane MARISHANE (South Africa), Muvambi we Headboy Industries
Marishane ekare 21 makore, ndiye muvambi wesangano Headboy maindasitiri, imwe kambani South African kuti kwakasimbiswa uye anobata bvumidzwa nokuda Drybath, wokutanga gel / mafuta germicidal pane bhati kuti ganda.
Cosmas OCHIENG (Kenya), Musiki weEcofuels Kenya
Cosmas OCHIENG munhu zvokuKenya entrepreneur unomhanya Ecofuels 26 makore Kenya, imwe East African zvakasimba kugadzira mambishi biofuels uye Organic fetiraiza zvakatipoteredza uye kubva zvemo renewable manyuko, dzakadai nati croton.
Eric MUTHOMI (Kenya), Muvambi weStawi Foods & Fruits
Izvi zvokuKenya entrepreneur 26 makore ndiye muvambi wesangano zvokudya uye muchero Stawi, imwe itsva kutanga-up kuti pave mabhanana kubva kuvarimi maduku mumisha Kenya uye Mabhokisi vave furawa mabhanana.
Joel MWALE (Kenya), Mutevedzeri weZviDrop
MWALE uyo ari mumakore 20 anoshandisa makambani SkyDrop, kambani yemvura inonaya mvura inounza mvura yakadhura yakachena yakanwa, kunwa uye mukaka wemichero muKenya. MWALE yakagadzira SkyDrop muna December 2009 uye kambani iko zvino inoshandisa vanhu vanopfuura 20.
Verona MANKOU (Congo), Tech Entrepreneur, Nheyo & Gavhuna weVMK
MANKOU ndiye muvambi weVMK, kambani yekambanikiti inotarisa pamichina yehupfumi, kunyanya mukugadzira, muAfrica, mahwendefa, maPc uye mafoni. Mu 2011 VMK inopa nzira-C, iyo yekutanga Android-powered tablet PC. Nzira-C inotengesa 300 $ USD uye inowanikwa muCongo neFrance. VMK inogadzirawo imwe yeAfrica Android smartphone inonzi Elikia. Mankou ndeye 26 yemakore.
Kuverenga zvakare: Bika: Vechiduku, nei muchifanira kuenda nekuvhota
Opeyemi AWOYEMI, Olalekan OLUDE & Ayodeji ADEWUNMI, Nigeria Vakavamba veJobberman
Vakuru vatatu vakatevedza Jobberman, Nigeria yakakura basa search uye aggregator. Jobberman akapinda mubasa muna August 2009, uye nhasi shanduro inokwezva kupfuura vashanyi vasati vasvika 50.000 zuva rega rega. Nekombiki iri nyore asi inopinza, Jobhoberman anounganidza vanhu vakakodzera kumabasa akanaka. Jobberman ndeimwe yemakambani mashomanana muNigeria teknolojia inzvimbo inotsigirwa nemari yekutengesa.
Oluwaseun OSEWA (Nigeria), Musiki weNairaland
Nigerian geek Oluwaseun OSEWA ndiye muvambi weNairaland, iyo huru pane yeInternet forum muAfrica. Akateya nzvimbo iyi muna March 2005 senhaurirano-chinangwa nhaurirano yemusangano nekunakidzwa kwezvinhu zvinofadza kune vanoNigeria. Nzvimbo yacho yakabviswa. Nairaland nhasi inenge mamiriyoni evanhu vanosvika mamiriyoni gumi nemamiriyoni ebhaibheri uye ndiyo nzvimbo yakakurumbira zvikuru kuNigeria. Kupa pfungwa: MuNigeria, Nairaland inowanikwa kune dzimwe nguva kupfuura Wikipedia. Nairaland inoona kukosha kwayo nekuda kwekutsvaga kwayo.
Ashley UYS (South Africa), Muvambi weMedical Diagnostech
The kambani Ashley Uys, Medical Diagnostech, anovandudza uye misika Kits kutengeka uye yakavimbika nemiedzo yezvokurapa marariya, pamuviri, njovhera, HIV / AIDS kuti varombo vomumaruwa South Africa. PF / Pan Kit (pLDH) wekambani kuti anoedza marariya anogona kuziva utachiona zvose nemarariya uye zvinoratidza muna 30 maminitsi kana marariya kurapwa inopiwa unoshanda. Last November, Medical Diagnostech akakunda $ 120.000 Foundation Prize SAB apo 2e wepagore reShanduro Social Innovation Award. Uys ane makore 29.
Sizwe NZIMA (South Africa), Musiki weIzaza Express
The South African entrepreneur 21 makore anotungamirira Iyeza Express, imwe kambani itsva iyo kunobatsira kuderedza yokuwandisa paruzhinji utano nemapazi nekunhonga hurukuro kuchovha zvinodhaka makiriniki nezvipatara kuti vagari mudunhu Western Cape, avo vari kurapa kwenguva yakareba.
William KAMKWAMBA (Malawi), muvambi
Ungana nemukomana uyo akashandisa mhepo. Akaberekwa muna Malawi, William aiva makore 14 chete kana akavaka hwindimiri kubereka magetsi kubva tsvina kupa nguva dzose tsime remvura nekuda papurazi mumusha Masitala pedyo mhuri yake kubva kuWimbe. Aine bhasikoro chidhayinamo uye chidhindo cheni, mumwe tarakita kurudza rabha mabhandi uye yemishenjere, William akakwanisa kuvaka hwindimiri iyo chinopa simba rakakwana kuti ishande zviviri maredhiyo uye mana Mabumba . Kuvakira mwero kubudirira pakutanga hwindimiri, William akatanga kuvaka hombe hwindimiri kubatsira musha wake kudiridza Kamkwamba uye kudzidza kuti dhigirii muzvidzidzo zvezvakatipoteredza uye hwokugadzira pana Dartmouth College kuti USA.
Sandra APPIAH naIsaka BOATENG (Ghana), CoVatangi ve Face2Face Africa
Sandra Appiah, 23 makore, uye Isaac Boateng, 28 makore, Ghanaians maviri ndiwo havaoni kuti Face2Face Africa (F2FA), mutsva nevezvenhau kambani kunobva muNew York City vane murayiro ndiko kudzorera mufananidzo Africa iri yose munharaunda. The kambani mapoka matatu: hachizi kuti anobudisa magazini kusora kuvandudza, tsika, varaidzo uye mufashoni mune Africa, nezvechiitiko utariri kambani uye simba Website.
Kuverenga zvakare: YALI: 1000 nzvimbo dzinowanika 2016
Ola OREKUNRIN (Nigeria), Chiremba uye nheyo yeFlying Doctors
Chiremba weNigeria uye muchengeti wezvoutano, OREKUNRIN, makore e25, ndiye muvambi weFlying Doctors Nigeria, wokutanga air ambulance service muWest Africa. Flying Doctors Nigeria inopa helicopter inotyisa, ambulensi uye mabasa ekubuda muNigeria nedzimwe nyika dzeWest Africa.
Andrew MUPUYA (Uganda), Muvambi we Youth Entrepreneurial Link Investments (YELI)
Muna 2008, Andrew akakwidza madhora e18 kubva kumhuri neshamwari ndokutanga kugadzira mapegi emapepanhe pane zvishoma. Muna 2010, akasika kambani yake, Youth Entrepreneurial Link Investments (YELI), iyo yava kutanga yekambani yakabhadhara mapepa emakambani muUganda. Iko ikambani inoshandisa pamusoro pe15 kuUganda uye YELI inonyanya kugovera mabhegi emapepa uye mavuputiki emakirini emunharaunda, mabhizimisi, vatengesi vemugwagwa uye vanogadzira vapfuti vemo. Pakati pe2008 uye nhasi, YELI yakabudisa mabhegi emapurani anopfuura hafu yemamiriyoni. Andrew Mupunya ane makore 20.
Chude JIDEONWO & Adebola WILLIAMS (Nigeria), Vakavamba veRed Media uye The Future Project
JIDEONWO uye WILLIAMS ndivo vashandi pamwe chete uye vanobatsirana veRed Nigeria, vanotungamira nhepfenyuro yakazara yevashandi, nhepfenyuro yekutaurirana neyekusimudzira muNigeria. Iyo kambani inewo The Future Project (TFP), inyanzvi yehutano hwehutano hwevanhu hunoita gore reMangwana Awards, zvikwereti zvakakura zveNigeria kune vechidiki vechidiki veNigeria.
Mark KAIGWA (Kenya), Ishamwari Afrinnovator
Mark KAIGWA, wemakore 25, ane tarenda ane matarenda ane tarenda, mutungamiriri, digital distributor uye mutengesi. KAIGWA ndiye mutevedzeri uye mubatsiri weAfrinnovator, kambani ine chinangwa chekuisa Africa pamepu nekubudisa zvinyorwa kuburikidza neAfrica innovation, teknolojia uye kutanga-ups. Iye anoshandawo neAfrica Digital Art, iyo inotungamirirwa neInternet rekushandisa yekugadziridza mukufambisa mumifananidzo, mufananidzo, kupikisa uye kugadzira kubva kuAfrica.
Arthur ZANG (Cameroon), muvambi
Gore rakapera, Arthur Zang, 25 makore, Cameroonian injiniya akazogadzira Cardiopad, vanachiremba musabata chinovhara tablet. With Cardiopad, mwoyo nemiedzo akadai unonzi, electrocardiograph (ECG) kunogona kuitwa ari kure, kumaruwa apo pakuongororwa zvaive wirelessly kuna vanachiremba vanogona kududzira. The Cardiopad anofanira kutengeswa muna 2013.
Thula SINDI (South Africa), Mutambo wemabhizimisi uye muvambi we Thula Sindi
Pamakore e28, iye mumwe wevane mukurumbira wevechirongwa muSouth Africa. Mushure mekunge apedzisa zvidzidzo zvake paLondon School of International Fashion, akaisa basa rake rokutanga semukuru mukuru weVlisco, kambani yeDutch textile. Akasiya nguva pfupi pashure pacho kuti atange mhando yake yezvigadzirwa zvekushongedza iyo inogadzirwa, inogadzira uye inotengesa nguo dzevakadzi dzakagadzirira-kupfeka.
Farai GUNDAN (Zimbabwe), dangamusha Farai Medias
Iyi Zimbabwean media uye muInternet muzvinabhizimisi ndiye muvambi weFarai Media, iri paIndaneti uye mushambadziro wekutengesa nzvimbo yakatarira kuAfrica. Iyewo akabatanidzwa pamwe chete neAfricanTripDeals, iyo nyika yose inoshambadzira nzira muAfrica.
NeMfonobong Nsehe, French version by nextafrique.com